Mampahatsiahy an'i Keliberano
2008-01-31 @ 10:23 in Andavanandro
Ho an'izay tsy mahalala ny tantaran'i Keliberano na nampalaza an'i Keliberano dia fintiniko vetivety aloha ny zava-nitranga. Tany amin'ny faritra atsimo misy ny fari-piadidian'i Fianarantsoa sy Toliary iny nandritra ny repoblika faharoa dia nisy famonoana mahatsiravina mpandeha iray taxi-brousse (ampolony no dikan'izany) teo amin'io faritra Keliberano io. Manaraka ny lalam-pirenena fahafito iny izany. Tsy dia fantatra loatra ny antom-panafihana tamin'ny voalohany fa mpanao dabokandro iray no niteny fa izy no tena notadiavina sy nokendrena tamin'io fanafihana io. Vao avy nahalafo omby maromaro manko izy ka nikasa handray ilay taxi-brousse. Teo ampiaingana anefa ranamana mpanao dabokandro dia toa nahatsikaritra zavatra hafahafa teny amin'ny mpitandro ny filaminana teny an-tsenan'omby (mila mijery tantara indray mandeha angamba aho fa na Ambalavao ilay tsenan'omby na Ihosy). Noheveriny fa izy no noresahin'ny zandary tamina Talkie Walkie hoe lasa (tamina taxi-brousse iray). Niala tamin'io taxi-brousse io izy ary niandry fiara hafa indray handehanana.
Akory ny hagagany rehefa nandalo an'io faritra Keliberano io izy fa feno diam-bala ny taxi-brousse nialany ary maty voatifitra avokoa ny mpandeha rehetra tao anatiny. Rehefa notopazana ny tao anatiny dia voasavasava avokoa ny entan'ny mpandeha ary hita hoe nojerena avokoa ny tavan'ireo mpandeha notifirina ireo. Afa-doza ranamana saingy ny hafa no nidiran-doza. Noheverin'ny olona tamin'izany fotoana izany, satria tsy reko ny valim-panadihadiana tamin'izay nanao io heloka bevava io, fa "zandary" angamba no nanao ny sakana ary nijanona soa aman-tsara ny fiara. Ny fijanonan'ny fiara tamin'ny sisiny manko no nieritreretana izany. Vao nijanona dia nitaky ny hijery olona tao ireo "zandary". Vao tafiditra ry zareo dia norarafany notifirina avokoa na mpandeha na mpamily. Ny olona lazondazony rehetra ataoko fa mahatadidy ity raharaha ity. Ny noahiahian'ny be sy ny maro tamin'izany fotoana izany moa dia olona ambony manana anjara toerana tamin'ny fitondrana ihany.
Niverina tao an-tsaina indray izany rehefa nandre sy nahita ny fanafihana nitranga teny Ampangabe (vavahady fidirana an'Analamanga) aho. Saiky fomba fitafy miaramila na mpitandro ny filaminana sy fitaovam-piadiana voatokana no nentin-dry zalahy. Saingy hafa indray ny paika: fiara indray no nanaraka azy. Ny zavatra tsy itovian'ny tantara dia tsy naripaky ny ny 'jiolahy' ny mpandeha. Ny nanaovany azy kosa dia toy ny efa matihanina mihitsy ry zalahy. Ny akanjo sy ny fitaovana moa dia an'ny na mifanakaiky amin'ny an'ny mpitandro ny filaminana ihany.
Efa nomarihan'ny mpamily moa fa tsy azo atao ny mandeha irery amin'ity lalam-pirenena ity fa tsy maintsy mifampiandry mba hanao tohivakana. Fanaon'ny mpandroba manko ny mifandray amin'ny alalan'ny finday amin'ny faritra manodidina azy hahalalany raha misy fiara mety handalo eo amin'ny toerana hanaovana ny fanafihana ao anatin'ny telo minitra eo ho eo. Dia tratra indray izany aloha ny mpanao dabok'andro tamin'ity indray mitoraka ity. Ary manana sampam-pitsikikovana matanjaka mihitsy ny jiolahy raha tsy hoe ry zalahy no manana namana ao amin'ny sampam-pitsikilovana nefa sanatriavina anie izany.